विचार/ब्लग – Page 13 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
एउटा टुर गाईडको प्रेमकथा
- लक्ष्मण सिटौला म पाहाडको छोरो । पहाडमा जन्मी हुर्केको । मेरो सालनाल पहाडमै गाडीएको हो । म खेली हुर्की बढेको पहाडमै । पहाड सग म परिचीत र म सग पहाड परिचीत । कहिलेकाही त यस्तो लाग्थ्यो बर्खाको भेलमा बगेको पहिरो म देखेसी चुपचापले बस्छ । मेरा बाबु आमा दाजुभाइ..
शान्तिराम ढकाल लस एन्जलस, अमेरिका । एनआरएनएको आठौं सम्मेलन काठमाण्डौमा भरखरै सम्पन्न भएको छ र एनआरएनले जितेको छ रआपसी सद्भाव चुनावी तालमेल हल्लाहरु जित को हारको प्यानल आदि कुराहरु चुनावमा हुनु स्वभाविकै हो परिणाम पछी ति कुराहरु स्वभाविक रुपमा हराउनु..
- लक्ष्मण सिटौला -पृथ्वी जुन तत्व बाट बनेको छ मानव शरीर पनि तिनै तत्व बाट निर्मित पार्थिव खोल हो । पृथ्वी आफै नीर्मल निर्मित छ। यस्लाइ अनिर्मल बनाउने काम मनुष्यहरुले गर्दै आए । मानवीय समगुणले मानव एउटै हो, तर मानवले नै मानव माथी अनेकौं बिबेधकारी नियम लागू..
एमाले माओवादी एकीकरण कि विलिन ?
प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०७४, मंगलवार
-कमल फुयाल, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गरेको चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकीकरणका लागि गरिएको सहमत यतिबेला चर्चाको बिषय बनेको छ । बामशक्तिहरुको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बामशक्तिको एकताका लागि पार्टी एकीकरण भनिन्छ तर पहिले देखिको इतिहास खोतल्दै जाने..
एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. पौडेलको जित र जिम्मेवारी
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०७४, आईतवार
गोकुल ढकाल लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया । सकियो, एनआरएन अमेरिकाको एउटा अध्याय । चर्को बहस, लामो विवाद र र्साकस्सीका विच चर्चित निर्वाचन सकिएको छ । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि डा. केशब पौडेल आफ्न टीमका बहुमत सदस्य सहित बिजयी भएका छन । 'हजुर म उपाध्यक्ष' भन्ने..
नेपाली जन सम्पर्क समितिको लोगो र नामको दुरूपयोग नहोस् !
हेमराज भट्ट लस एन्जलस, अमेरिका । बि.सं. २०१७ साल पुष १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रद्धारा सैनिक शक्तिको बलमा गरिएको असंबैधानिक र अप्रजातान्त्रिक राजनितिक कदम कु संगै बिकसित राजनितिक घटनाक्रम र परिवेश पछि लगातार ८ बर्षको काराबास सजॉंएबाट छुटकारा पाई..
घुमीफिरी डा. पौडेल
गोकुल ढकाल लस एन्जलस, अमेरिका । अन्तत: सेप्टेम्बर ५ र ६ तारिख बहुचर्चित एनआरएन, अमेरिकाको निर्वाचन हुने नै भएको छ । सामाजिक संजालका भित्ता र अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने प्राय: अनलाईन मिडियाहरु एनआरएन, अमेरिकाको निर्वाचनका उम्मेद्वारहरुका प्रचार, खबर र..
म डा. पौडेलको कि ई. जोशीको ?
प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०७४, सोमबार
गोकुल ढकाल लस एन्जलस, अमेरिका । सपना बोकेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भनेर टन्टलापुर घाममा घैंया गोड्दा गोड्दैको कुटो फ्यांकेर 'हामी पनि हुंईकिंयौं बाबै, साझा बसैमा' भन्दै राजधानी काठमान्डौं हिडिंयो । सानो कदको आफु, कहिल्यै लामो यात्राा नगरेको । चलेको बस..
ए-नारान, यता सुन त !
प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०७४, आईतवार
गोकुल ढकाल लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया । 'यस्तो तनाव त जीवनमै कहिल्यै भएको थिएन, हुंदा न खांदाको चिन्ता ।' एनआरएन अमेरिकाको आसन्न निर्वाचन समितिका एक सदस्य टेलिफोनमा कुनै उम्मेद्वारसंग बैरागिदै थिए । आकाशमा तुंवालोले ढाकेन भने बिरक्तिएरै भएपनि सम्भवत यो..
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०७४, मंगलवार
लक्ष्मण सिटाैला रत्न दाइ गरीब थिए तर खुशी नै थिए । वास्तवमा मानिस गरिबीले दुखी हुने होइन। दुखी हुने कारक अरु अनेकौं छन। खानै नपाएर कुन चाहिँ जनावर मरेको छर पृथ्वीमा ! रत्न दाइका तीन छोरा स्कुल पढ्दैथे । तामाका मुना जस्ता सलक्क हुर्कदै गरेका । रत्ना भाउजु..